မိုးပန်းပွင့်ရဲ့သင်္ကေတ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်း အမှတ်တရ ပုံရိပ်ဇာတ်လမ်းများနှင့် အတူ ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်ရေ ရုံတင်ပြသပေးနေပါပြီနော် ~
နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြိုက်သူများအတွက်
မိသားစုများအတွက် ~ ချစ်သူများအတွက် ~
Forever Group Co., Ltd မှ ထုတ်လုပ်တင်ဆက်ထားပါသည်...
အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင် (၈) ဦးပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီး
ပရိသတ်ချစ် MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲ သရုပ်ဆောင်များ ပါဝင်သည့်
ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်း အမှတ်တရ ပုံရိပ်ဇာတ်လမ်းများနှင့် အတူ
ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်ရေ ရုံတင်ပြသပေးနေပါပြီနော် ~
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြတဲ့ သူတွေကတော့ ဒီလိုလေးတွေရဲ့ Character လေးက ဒီလိုဗျ ...
ရိုးသား အေးဆေးသည့် ပညာတတ်မိသားစု၏ သားကြီး သြရသ...
ဘဝကို အပျော်သဘောနှင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေထိုင်ပြောဆိုလေ့ရှိပြီး အရေးကြုံလာတဲ့အခါ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဘဝကို ဦးဆောင်နိုင်သူ...
လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ အရာကို ဆာလောင်နေသူ... သြဇာ
ပြည့်စုံသည့်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်း မိဘနှစ်ပါးရဲ့
အားပြိုင်မှုကြားမှာ မြေစာပင်ဖြစ်ရရှာသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်။
မိဘမေတ္တာငတ်မွတ်နေသော်လည်း အရာရာကို လေးလေးနက်နက် တန်ဖိုးထား ဖြတ်သန်းနေသူ ……. “မိုးပန်းပွင့်” အဖြစ် မေမြင့်မိုရ်
မရှိမရှား မိသားစုနဲ့ ဘဝကို ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်သူ
သူငယ်ချင်းကြားက သံယောဇဉ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့
အေးဆေးတည်ငြိမ်သူ …… “ချိုမြိန်” အဖြစ် နေအဉ္ဇရာ (ခြူးလေး)
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စာပေနှင့် ကဗျာကို တန်ဖိုးထား အချိန်ပေးတတ်ပြီး သမီးဖြစ်သူ မိုးပန်းပွင့်ကို အရမ်းချစ်သော မိုးပန်းပွင့်၏ ဖခင် ဦးကိုကိုထွန်း
အဖြစ် .... အကယ်ဒမီ ရန်အောင်
ပိုက်ဆံချမ်းသာသော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ဆင်းသက်လာပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရှာ ကောင်းသူ...
မိုးပန်းပွင့်၏ မိခင် ဒေါ်ခင်မိုးသွယ် အဖြစ်...အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာ
ခင်ပွန်းဆုံးပါးသွားသည့်နောက် သားသမီး ၃ယောက်ကို စက်ချုပ်၊ ဈေးရောင်းပြီး မိသားစုကို ဦးဆောင်ထိန်းကျောင်းခဲ့သူ...
မရှိ/မရှားဘဝဖြင့် ခြိုးခြံချွေတာပြီး ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူ...
ချိုမြိန်၏ မိခင် ဒေါ်မေဦး အဖြစ် အကယ်ဒမီ မေသဉ္ဖာဦး
ပညာတတ် အရာရှိ တစ်ယောက်...
မိသားစုနှင့် အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် တန်ဖိုးထားသူ...
သားသမီး ၃ယောက်အား လိမ္မာယဉ်ကျေးပြီး မိသားစုအပေါ် ချစ်ခင်တတ်အောင် သွန်သင်ပေးသူ...
သြဇာ လေးစားချစ်ခင်ရသော ဖခင် ဦးအောင်ရဲနိုင် အဖြစ် အကယ်ဒမီ ရဲအောင်
(၁၄-၉-၂၀၁၈) နေ့ ရုံတင်ပြသပေးမှာနော်….. (မမေ့နဲ့ဦး) ….
ဟန်လင်းသန် ရန်အောင် ရဲအောင် စိုးမြတ်သူဇာ မေသဉ္ဖာဦး မေမြင့်မိုရ် နေအဉ္ဇရာ